Talo Caafimaad: Maxaa Xoojin kara Awooda Galmada oo yaraata. | Gaaloos.com
Home » galmada » Talo Caafimaad: Maxaa Xoojin kara Awooda Galmada oo yaraata.
Talo Caafimaad: Maxaa Xoojin kara Awooda Galmada oo yaraata.
Xaaladaha caafimaad ee qofka bani’aadamka ahi ka cawdo ayey ka mid tahay Galmada oo uu tahli waayo ama uu isku dhalliilo. Dumarka iyo ragguna way ku kala geddisan yihiin. Labadana waxa daran ragga, oo marka xubinta taranku uu ka awood yareeyo. Arrintani malaha da’ u gaar ah waxana keeni kara Vitaminnada jidhka oo yaraada, amma waxyaalo kale.
Title: Talo Caafimaad: Maxaa Xoojin kara Awooda Galmada oo yaraata.